မော်ဒန်ကဗျာတစ်ပုဒ် ခေါင်းရှုပ်ရှုပ်နဲ့ ရေးခဲ့ဖူးခြင်း | PoemsCorner
မော်ဒန်ကဗျာတစ်ပုဒ် ခေါင်းရှုပ်ရှုပ်နဲ့ ရေးခဲ့ဖူးခြင်း
မိုးသားတွေ အုံ့မှိုင်းနေတဲ့ မြို့ပြရဲ့ ညတစ်ည….
မှိတ်ထားတဲ့ မျက်လုံးများနဲ့ အဝေးတစ်နေရာကို လှမ်းကြည့်နေမိတယ်…
ရင်မော့ ခေါင်းကော့ ပြီးပေ့ါ….
သမုဒ္ဒရာထဲ လက်ပစ်ကူးနေတဲ့ ဗေဒါတစ်ရွက်လို…
ပိုက်သာဂိုးရပ် လဲ ရူးခဲ့ဖူးတယ်….
အဖြူရောင်ဖျော့ဖျော့ မာန နဲ့…
ကျွန်တော့ အတွက်တော့ ကောင်းချင်မှကောင်းမှာပါ…
ခင်ဗျား ရေးတဲ့ ခင်ဗျား ဦးနှောက်…
ယောင်လို့တောင် ကျွန်တော် ဖောက်မစားခဲ့ဖူးလေ….
ကိုလိုချင်တာ ကိုယ် မသိတဲ့…
နေရပ်က အပြန် …
အာခိစ့်လိစ့်ရဲ့ ခြေဖနှောက်ထဲလဲ ကျည်တစ်တောင့် ကျွန်တော် ပစ်မသွင်းဖူးဘူး…
ခေါင်းငြိတ်ပြီး ငြင်းလိုက်ရုံမှ တစ်ပါး အခြား မရှိလေဖူး …..
In: ကဗျာ Posted By: Meaningless Date: Jun 27, 2014
ခင်ဗျားရက်စက်တတ်တယ်(တနည်း -ပြုံးအသက်လေးရယ်…တဲ့…ရှည်စေလို )
Leave comment2Comments & 413 views
မော်ဒန်ကို နားမလည်ပေမယ့် …..နားလည်ချင်ခဲ့တယ်…..နားလည်ဖို့ ကြိုးစာရင်း မျက်စိတွေ နောက်သွားတယ်….
တစ်ခုပဲ ….မော်ဒန်နဲ့ပတ်သက်လာရင် ရိုးသားမှူ့ကိုပဲ လိုချင်တယ် စာရေးသူ အဲ့သည့်အချိန်(ကဗျာရေးနေတဲ့ အချိန်)က ဘာတွေကို တွေးပီးရေးလိုက်သလဲဆိုတာ ကို စကားပြေ အနေနဲ့ ဖတ်ချင်တယ် …ရိုးရိုးသားသား နဲ့ပေါ့ လှည့်ပတ်မတွေးပဲနဲ့ပေါ့
By: နေ့သစ် at Jun 30, 2014
အဲ့အချိန်တုန်းက ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာတွေကိုသာ စကာပြေလုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုနေ့သစ်တစ်ယောက်ပိုခေါင်း ရှုပ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်…. မော်ဒန်ဆိုတာ ကိုလိုချင်တာကို ကိုယ်တွေးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်…. အဓိပ္ပါယ်ဆိုတာကို သူက ငြင်းဆန်နေတယ်…မိတ်ဆွေအတွက်အကောင်းဆုံး အကြံကတော့ ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့သာကိုယ်ပုံဖော်ကြည့်လိုက်ပါလို့ ဗျာ
By: Meaningless at Oct 3, 2014